Ukufa komuntu othandekayo kuyisikhathi sokududuza abantu ababaziyo. Indlela yokuveza induduzo
Ngingayichaza kanjani induduzo yami yokufa?
Akunakwenzeka ukulungiselela ukufa kusengaphambili, futhi ngisho nalapho umuntu esekhulile noma egula isikhathi eside, izindaba zokufa kwakhe zingase zithinte ngempela abathandekayo bakhe. Emva kwalezi zindaba ezidabukisayo, kuvunyelwe ukududuza izihlobo, abangane, ozakwabo kanye nabo bonke ababazi oshonile. Indlela yokwenza ngayo - ukukhetha komuntu ngamunye. Abanye bakhetha ukuzwelana ngomlomo, abanye - ukubhala incwadi, okwesithathu - ukwabelana nobuhlungu evesini, imibono ye-condoles ngezenzo.
Indlela yokuveza ukududuzwa kwiprosethi?
Emagama alula futhi aqondakalayo kufanelekile ukuveza usizi lwakho kokubili efonini, nangomuntu siqu, nasencwadini noma ngisho nomyalezo wombhalo. Into eyinhloko ukulandela imithetho ejwayelekile futhi yenze ngesikhathi, ngoba ngesikhathi lapho abasondelene nabo bebuhlungu kunabo bonke, uzwela luzofaneleka kakhulu. Zama ukusho ngomuntu oshonile:
ngobuqotho nangenhliziyo yonke;
cabanga ngalomuntu, umkhumbule, bese amagama ezoba ngumuntu siqu;
khumbula izikhathi zokukhanya ezihlotshaniswa nakho, zama ukwenza ukumomotheka okusizilayo enkumbulweni yokufa okungakafiki.
Ubuqotho bakho buzobonakaliswa ngokunikezwa kosizo olungenzeka (ngenhlangano yemingcwabo, ukubhaliswa kwamadokhumenti, ukuthengwa kwempahla yesiko). Mhlawumbe abalilayo bayokwenqaba noma bangasinaki isiphakamiso sakho, futhi lokhu akusona isizathu sokuthukuthela, ngoba umuntu ngamunye ubuhlungu bubonakala ngendlela yakhe. Ukubamba, ukuthinta kanye nezinyembezi eziqotho kuzosho nokuthi awunandaba nomuntu oshonile kanye nezihlobo zakhe. Ngezinye izikhathi imizwa enjalo yokuzizwa iyasiza ukukhipha imizwelo enzima, futhi izihlobo zomuntu oshonile ziba lula. Noma kunjalo, inkulumo ingachaza ukuthi yini engabonakali ukuba yenziwe. Ngokwemlomo noma ngokubhala - ungenzi amagama omzwelo enkulumweni ende. Imisho emibili noma emithathu yanele ukubonisa ukuzwelana. Isibonelo:
Wayekusho ngempela kuwe futhi kimi. Ngihlanganyela ngodaba lwakho, futhi ngeke ngikhohlwe ukuthi ungubani mina. Ngizomthandazela.
Wasinika imfudumalo kakhulu nothando, wafundisa kakhulu ... Ngiyalela nawe, futhi uma ngingasiza, ngisho nje.
Angiyikukhohlwa, njengoba ethi kimi: "...".
Ngangingazi, kodwa ukhuluma ngaye njalo ukuthi kubonakala sengathi ngiyamazi. Ngiyaxolisa kakhulu. Bamba! Nginani.
Sicela wamukele izinduduzo zami. Uma ngingakwenzela okuthile, khona-ke ngizojabula kakhulu.
Yiqiniso, lezi zibonelo azizona izifanekiso zokuletha isihawu ngokufa, kodwa, mhlawumbe, zizokusiza uthole amagama afanele enhliziyweni.
Ngidlulisela kanjani ukufa komama nobaba?
Ubuhlobo bomndeni buhlukile, kepha nokho cishe njalo abazali bangabantu abaningi bomdabu. Ukulilahleka kunzima kakhulu, futhi usizi lungabi nalutho. Yingakho kubaluleke kakhulu ukubonisa ukuzwelana ukwabelana ngemizwa enzima, ukuthatha ingxenye yalo mthwalo ongenakubekezeleka kuwe. Zama ukugwema ama-jam-packed, amagama aphihliwe afana nokuthi "kufanele ubambelele", "Ngiyazi ukuthi kunzima kangakanani kuwe," "isikhathi siyaphulukisa," "ngezinye izikhathi ukufa kuyisiphuzo." Uma lokhu kuyiqiniso, wonke lawa magama asevele evele engqondweni yomuntu osilayo, futhi uzokwenza umqondo wokungakhathaleli, njengokungathi bavele benza umsebenzi wabo njalo. Tshela lowo muntu ukuthi abazali bakhe bayizizwe ezimangalisayo. Ngisho noma ungabazi, kumelwe uzwe ngabo. Ikakhulukazi kusukela ukhuluma nalowo abakhulile. Buza umngane ngezikhathi eziqhakazile kusukela ebuntwaneni, ezihambisana nomama nobaba - izinkumbulo zisiza ukuphazanyiswa okuncane, ukubekezelela ubuhlungu bokulahlekelwa.
Yimaphi amazwi abonisa ukududuza?
Zama ukugwema ukuthambekela kwemfashini ukuthola induduzo evesini noma uthumele umugqa wokuzwelana nge-SMS. Uma ubhala umyalezo omfushane, bese ucingo lukhona, kungani ungafoni? Ukuzama ukwenza induduzo ngokwemibandela kungadala umsila ongathandeki, njengokungathi uyadabuka noma usebenzise inkulumo lapho kudingeka ukushisa komuntu okulula. Akudingekile ukuthi usebenzise izinkulumo eziphakeme kakhulu-nazo zizophonswa cishe. Ngitshele ngozwela lwakho ngomuntu noma ngocingo, futhi uma ungakwazi - bhala incwadi ephepheni noma e-mail. Ngakho-ke awuhlaziyi umzuzu, kodwa, mhlawumbe, usizo lokunciphisa umthwalo wokudabuka.
Ungayenza kanjani izicathulo ze-outsole ezingezona isilayidi?
Indlela yokuhlanza i-sofa kusuka kokungcola
Yini ongayinika indoda iminyaka engu-55?
Isaladi kusuka kuma-radishes namakhukhamba
Amakhukhi nge-chocolate ne-apricot jam
Spring umhluzi ngamakhowe
Luo Pan, ikhampasi feng shui
I-Lumaconi ngokugcwalisa (i-lily ekhanda)
Ukuqaphela ukuziphatha okuhlukumeza kwengane
I-infusions esebenzayo namaqoqo we-birch